Global Voices teny Malagasy » Creative Commons Meksika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Septambra 2017 3:14 GMT 1	 · Mpanoratra David Sasaki Nandika Miranah
Sokajy: Amerika Latina, Meksika, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka
(Marihana fa efa tamin'ny volana Martsa taona 2006 no nivoaka ny lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy)
Toa mientanentana tokoa ny Tale Jeneralin'ny Foibe Berkman, John Palfrey raha nanoratra  hoe:
Right this very minute, Creative Commons Mexico  is launching in Mexico City. Congratulations, Larry Lessig , Leon Felipe Sanchez , and all the CC International team  on yet another landmark on your road to world domination. For atmospherics, Larry has “My Life ” playing in the background… (This launch is coinciding with the end of Day 1 of iLaw-Mexico here.)
Vao manomboka izao minitra izao, manomboka ao Mexico City ny Creative Commons Mexico . Arahabaina, Larry Lessig , Leon Felipe Sanchez , sy ny ekipan'ny CC ( Creative Commons ) Iraisampirenena  amin'ny mari-pamantarana iray hafa amin'ny lalanareo mankany amin'ny fanjakazakana manerantany. Ho an'ireo atmosferika, manana ny “My Life ” milalao eny ifotony i Larry… (Mifanojo amin'ny faran'ny Andro voalohan'ny iLaw-Meksika eto ny fampahafantarana.)
Ao amin'ny iLaw, mibilaogy mivantana isaky ny atrikasa i Eduardo Arcos , teratany Ekoadaoriana monina ao Mexico amin'izao fotoana. Mikasika ny spam ao Meksika, mamintina ny teboka lehibe (ES)  nolazain'i Clara Luz Álvarez González de Castilla (eo amin'ny sary) avy ao amin'ny Vaomiera Federaly  ny Fifandraisandavitra toy izao:
Ny olana ao Meksika dia ny olan'ny fiarovana antserasera ary mitovy ny amin'ny firenen-kafa izany.
Mipoitra any amin'ny fampahalalam-baovao hafa ny Spam. (Fandefasan-kafatra an-tsotratra ohatra, tsy lazaina intsony ny fanehoan-kevitra spam any anaty bilaogy)
Meksika no mpamokatra spam betsaka indrindra faha-11.
Misy ny fiantohana roa voalazan'ny lalàmpanorenana: ny fahalalaham-pitenenana, izay tsy afaka mandrara ny fandefasana hafatra be dia be ao amin'ny aterineto sy ny fahalalahana miasa izay tsy afaka mandrara ny olona tsy hiasa amin'izany.
Mihabetsaka ny spam politika.
Misy ny ezaka hampivelarana ny politika mifandraika amin'ny sehatry ny fiarovana an'aterineto any Amerika Latina.
Misy ny hantsana nomerika miharihary ao Meksika. Noho ny fihisatry ny fifandraisana ao amin'ny ankamaroan'i Meksika, lafo vidy amin'ny resaka fotoana sy loharanom-bola ny fampihenana ny spam.
Sary avy amin'i Eduardo Arcos
Tamin'ny herinandro lasa, nanapa-kevitra vao haingana hanome alalana ny votoatiny amin'ny fampiasana ny Creative Commons i León Felipe Sánchez interviewed Luis Alberto Bolaños sy Emilio Saldaña  ao amin'ny Rafitra Aterineto ny Fiadidian'ny Filoha  (Presidential Internet System) (SIP) . Rehefa nanontaniana ny antony nahatonga ny fiadidian'ny filoha nanapa-kevitra hampiasa ny fahazoan-dàlana CC, dia namaly izy ireo hoe:
Iray amin'ireo tombontsoa lehibe indrindra amin'ny Fiadidian'ny Repoblika ny, raha vantany vao tafavoaka ny votoaty, manao izay hahazoana olona betsaka araka izay tratra. Ampiasain'ireo mpikaroka, mpampianatra ambony, mpianatra, ny gazety ary ny vahoaka amin'ny ankapobeny ny votoaty. Amin'ny fampiasana ny fahazoan-dàlana Creative Commons, azontsika atao ny manome alalana ny fandikana, ny famokarana indray, ny famoahana votoaty sy ny zavatra rehetra mamela azy ho voazara amin'ny olona marobe. Maimaim-poana avokoa izany rehetra izany, izay tena arovan'ny drafitra fahazoan-dalana Creative Commons indrindra. Izany rehetra izany, sy ny zava-misy mifototra amin'ny lalàna Meksikana momba ny zon'ny mpamorona.
Mitohy mandritra ny tontolo andro ny iLaw Meksika ary azonao atao ny mijery ny tatitra bebe kokoa ao amin'ny Ariel Vercelli (ES)  sy Eduardo Arcos (ES) .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/09/29/107558/
 Creative Commons Mexico: http://creativecommons.org.mx/
 Larry Lessig: http://www.lessig.org/blog
 Leon Felipe Sanchez: http://www.leonfelipe.org/
 CC International team: http://creativecommons.org/worldwide/mx/
 My Life: http://www.activefreemedia.com/gallery/music/colin/my_life.mp3
 Eduardo Arcos: https://mg.globalvoices.orgtp://www.alt1040.com/
 Vaomiera : http://www.cft.gob.mx/
 León Felipe Sánchez interviewed Luis Alberto Bolaños sy Emilio Saldaña: http://creativecommons.org.mx/2006/03/07/entrevista-a-alberto-bolanos-y-emilio-saldana-del-sistema-de-internet-de-la-presidencia/
 Rafitra Aterineto ny : http://sip.gob.mx/
 Ariel Vercelli (ES): http://www.arielvercelli.org/blog/
 Eduardo Arcos (ES): http://www.alt1040.com/